internet line condition များ …. အခြေအနေမှန်သိလို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » internet line condition များ …. အခြေအနေမှန်သိလို
internet line condition များ …. အခြေအနေမှန်သိလို
Posted by fatty on Oct 29, 2010 in News | 20 comments
တနိုင်ငံလုံး condition များပြတ်တောက်မှုမှာ ပုဂံ ဆာဗာ အကိုက်ခံရရ်ျဟုသိရသည်။
နိုင်ငံတော် ဘဏ်များငွေလွဲပြောင်းမှု … နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများတွင် အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်
ကုန်မှုတို့ကြောင့် အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်လျှက်ရှိသည်။ သက်ရှိသတ္တ၀ါကြက်ပေါက်များတင်သွင်းသည့် company များတွင် စာရွက်စာတမ်းများ မပို့နိုင် ..လက်ခံရ်ျလည်းမရသဖြင့် အတော်ပင်အခက်အခဲဖြစ်နေကြသည်။
အားလုံးတော့ ဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့ဗျာ..။ အများကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလေ ပိုဆိုးလာလေပဲ ပြောနေကြတာပါပဲ..။
ပို့စ်တင်ဖို့ နေနေသာသာ မန္တလေးဂေဇက်ကို ဒီနေ့မှ ညအချိန်မှာ ၀င်ကြည့်လို့ ရတာဗျို့..။
ဟုတ်ပါ့ ညဘက် မသုံးတာ အတော်ကြာပြီ အခုမှဘဲ.. ညဘက် ကို အားသွန်ခွန်စိုက် သုံးနေရတယ်.. အကြောတွေတောင် တက်နေပြီ.. ကိုယ်ဇွဲနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့.. ခံရမှာဘဲ.. အင်တာနက်မရခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကြန့်ကြာမှု ဖြစ်နေတယ်။
အင်တာနက်လိုင်းများသည် နေ့ဘက်တွေ မနက် ၉နာရီမှ စ၍ တိကနဲ ပြတ်သွားပြီ နေ့လည်း ထမင်းစားချိန်တွင် နာရိဝက်ခန့်ရတတ်သည်..
ည ၆နာရိ ကျော်ရင် ရတတ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ မရပါ.. အခု ည ၁၂နာရိမှ ရပါသည်။ ဘယ်အချိန်အထိ ရမလဲတော့ မသိပါ
ညသန်းခေါင်ကျော်မှ ဆူးကိုမြင်လိုက်လို့ အံ့သြသွားတယ် … အင်တာနက်အခြေအနေမှန်ကိုသိရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး …
မအံသြနဲ့.. ဖြစ်ပျက်တွေ များနေလို့.. ညဘက် လာချောင်းတာ
စာတွေ တင်ချင်တဲ့ စိတ်တောင် ကုန်တယ်..
ရေးမလို့ တွေးထားတဲ့ စိတ်တွေလည်း မရှိတော့ဘူး ဖြစ်ပျက်တွေ ကြာလွန်းလို့..
ဆရာဖက်ရေးတာ ဖတ်ရတော့လည်း တကယ်ဖြစ်နေသလို၊ ဒါပေမဲ့ ဆူးပြောတာကြတော့လည်း ရတဲ့အခါ ရတယ်ဆိုတော့ အင်း.. တယောက်ယောက်ကတော့ ထောက်လှမ်းရေးပဲဖြစ်ရမယ်။
ထောက်လှမ်းရေးက ဦးကြောင်ကြီးလား @_@
(သက်ရှိသတ္တ၀ါကြက်ပေါက်များတင်သွင်းသည့် company များတွင် စာရွက်စာတမ်းများ မပို့နိုင် ..လက်ခံ၍လည်းမရသဖြင့် အတော်ပင်အခက်အခဲဖြစ်နေကြသည်) အဲဒါလေးကို မသိလို့ ပါ ခင်ဗျ
မွေးမြူရေး ကြက်သားသားလေးတွေ ကို ပြည်ပကနေ အင်ပို့ လုပ်တယ် အဲ့လိုလား ဘယ်နိုင်ငံကလည်းခင်ဗျား
ိကျနော်ကတော့ ကော်နက်ရှင်းကောင်းမကောင်း အုံးအစား မခံတော့ဘူး။
ည93း0 အင်တာနက်ဆိုင်လာမယ် လိုင်းပွင့်ရင် ဖွင့်မယ်။
မပွင့်ရယ် ရေးချင်တာကို ရေး ကိုယ်ပိုင် စတစ်လေးထဲမှာသိမ်း 113း0ဆိုရင် ပိုက်ဆံပေးပြီးအိမ်ပြန်လိုက်တာပဲ။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဆိုက်ထဲမှာ တခါတည်းရေးပြီးတင်တာက လူသက်သာတယ်။
သိမ်းပြီးပြန်တာတာက စာလုံးတွေမညီတော့ ပြန်ပြင်ရတာပင်ပန်းတယ်။
ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တဲ့ဘ၀ကြီးမှာ ဖြစ်သလို ဖြစ်အောင်နေလာတာ အသားကျနေပါပြီဗျာ။
ပြည်တွင်း ဆိုက်တွေရတယ်.. .com.mm အဲဒီဆိုက်တွေမှာ ၀င်ရေးတာဘဲ.. စာတွေ ရေးပြီး သိမ်းရတာ တော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်
တခါတည်း ရေး တခါတည်း တင်.. ပိုအရသာ ရှိတယ်။
connectionမကောင်းတာ တော်တော်လေးကို ဆိုးပါတယ်.. အထူးသဖြင့် mandalay gazetteဖတ်လို့မရတော့ ဘာသတင်းမှ မသိရတော့ဘူး..ရတဲ့ အချိန်လေးမနည်း loadingလုပ်နေရတယ် ။
ခုလည်း commentရေးရင်း connectionကျသွားပါသည်။ တော်တော်လေးကို စိတ်ညစ်တယ်
ဂျော်နီအောင်ပုသို့ အစီရင်ခံပါသည်။ လူကြီးမင်၏ပုံမှာ တဦးဦးနှင့်တူသလိုလိုဖြစ်နေသဖြင့် စာရိုက်ရတာတောင်လက်တုန်ချင်သလိုဖြစ်နေပါသည်။ ကြက်ပေါက်လေးများကို Australia , Thai တို့မှ အများဆုံးတင်ပါသည်။ အဲဒီမှာ အကောင်ပေါက်ပြီးတာနဲ့ ဆေးထိုးပြီးတချိန်ထဲ လေယာဉ်ပေါ်တင်ရပါသည်။
ွှThai မှာ transit လုပ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်ရောက်တော့ ရေ ဆာနေပါပြီ။ ဘူးတွေထဲထည့်လာရသဖြင့် အချိန်လွန်ပါက
ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ ဒီရောက်တော့ custom မှာရွေးဘို့လဲလုပ်ရော ဟိုဘက်နိုင်ငံ့များက စာရွက်စာတမ်းများ မ၀င်ပါကရွေးယူရာမှာပြဿနာပါ။
သနားစရာ ကြက် သတ္တ၀ါ ပါလား.. ကာစတန်က တော့ ဒီလိုဘဲ.. အေးရှားဝေါထဲ တခါ သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ လမ်းကြုံလို့ လိုက်ဝင်သွားတာ ကားကြီးတွေ ကောင်းလိုက်တာ အရမ်းဘဲ.. အဲဒါ စာရွက် နောက်ကျလို့.. ဆုံးသွားတဲ့ ကားတွေတဲ့.. လေလံပစ်မှာတဲ့..
internet line condition များအကြောင်းကနေ လိုင်းတော့ကြောင်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်ဦးနှောက်ခြောက်သွားလို့..။
မြန်မာပြည်က ကြက်ပေါက်လေးများကို Australia , Thai တို့မှ အများဆုံးတင်ပါသည်ဆိုတော့.. မြန်မာပြည်မှာ ကြက်က မပေါက်လို့လား..။
ဘာဖြစ်လို့ ..မြန်မာပြည်တွင်းမှာ သားမဖေါက်တာလည်း. သိချင်လို့ပါ။
အဆင်ပြေရင် မြန်မာကြက်များအကြောင်းဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တောင် ခွဲလို့ရနေပြီ..။
ဒီနေ့တော့ တော်တော်လေး လိုင်းက အဆင်ပြေတယ်ဗျ… voice တောင် တော်တော်လေး OK တယ်… ခုတောင် လိုင်းကောင်းနေတုန်း အားရပါးရ ဒေါင်းလုတ် ချနေတာ…
thu myarr ko lwal cha chin nay tal
con lone: wa pyat tought te`.achain mhar
(e departure form of myanmar- Online D-Form)ka tot lone wa ya nay tal
10 ku louth sat tite Apply lite tal ya nay tal
ta charr har tway pe ma ya tar sinn sarr kyae. tot
မြန်မာပြည်မှာ ကြက် ၂ မျိုးရှိပါသည်။ မွေးမြူရေးကြက်နှင့် မြန်မာကြက် ဟူရ်ျဖြစ်ပါသည်။မွေးမြူရေးကြက်များမှာ နိင်ငံခြားမှသွင်းပါသည်။ နိုင်ငံ့ခြားမျိုးပေါ့ခင်ဗျား။ မတူကွဲပြားမှုအကြောင်းကိုတော့ နောက်များမှ post သပ်သပ်
တင်ပါအုံးမည် ခင်ဗျား။ဘာသာရေးကြောင့်မဟုတ်ပါ။ စားရတဲ့အရသာမတူရ်ျဖြစ်ပါသည်။
မွေးမြူရေးကြက် ၄၅ရက်ဆို စားလို့ရပြီ.. အသားကြီးဘဲ.. အဆီတွေ ပေါမှပေါ..
မြန်မာကြက် အရိုးကြီးဘဲ.. အသားကျစ်တယ်.. စားကောင်းတယ်.. ဈေးကြီးတယ်.. အသက်က တော့ ၃ ၄ နှစ်လောက်ထားကြတယ်.. အိမ်မှာ ချစ်လို့မွေးရင် ၁၀နှစ်လောက် အသက်ရှည်တဲ့ ကြက်တွေ မြင်ဘူးတယ်။
တိုက်ကြက်ဆို ပွဲကောင်း တွေမှာ နာမည်ရှိရင် ၁၃သိန်းလောက် ပေါက်တယ်။ ဟီးဟီး.. ကြားဘူး နားဝ.. လျောက်ရေးလိုက်သည်။